gingqika umshini ibhande uhlobo shot ukuqhumisa - China Qingdao Antai Heavy Imboni
1) evumela izingxenye ukuba wawiswa ngaphakathi, ukuqinisekisa ngisho kuqhuma Ukuhlanganisa bonke evele. Ibhande yakhelwe ukunikela kakhulu nemihuzuko ukumelana, ngesikhathi esifanayo ekuletheni okusezingeni eliphezulu umthwalo amakhono.
2) ulungise isondo kuqhuma nebhande isivinini okusekelwe uhlobo izinto ziphathwe, shot yethu ukuqhumisa izinhlelo ukuqinisekisa ukusebenza high.
3) Nge yabo kuhlanganiswe phambili / ukuwa ukunyakaza izinto, lo shot Tumble ibhande ukuqhumisa izinhlelo ukuqinisekisa izinzuzo eside ngokuya ukubukeka isiqediwe futhi mfushane ukucutshungulwa izikhathi.
4) Lisebenzisa ngesivinini cantilever uhlobo centrifugal ophephela kuqhuma amasondo, okuyinto kakhulu ukuthuthukisa wokuhlanza umphumela nekghono. Zonke amasondo kuqhuma kukhona ibhalansi ashukumisayo kuhloliwe, okwenza kube has vibration awumkhulu futhi mncane umsindo.
5) Material izindwani, distributor olwalwenza, nokulawula yezinyoni-chrome okusezingeni eliphezulu, angasetshenziswa amahora 500 phezu. Enye Taiwan ezenziwe izindwani impahla ekhethekile, okuyinto has amahora 1000-1600 esaphila.
6) ibhande Tumble has iraba impahla kanye steel manganese.
7) isikhwama Pulse jet uhlobo uthuli ngalendoda, uthuli ukususa kahle iphelile 99%. Okuhle Ngomsebenzi nokuvikelwa kwemvelo. A igobolondo uhlobo uthuli ngalendoda angakwazi ukulawula emakamu uthuli ngaphansi 50 mg / M3.
8) Loader okuzenzakalela omkhulu ukukhiqiza okuqhubekayo exhunywe kwi umugqa production. (Uma uthanda)
9) Air isilinda umnyango qhutshwa, operation lula futhi ukubekwa uphawu ezinhle.
Into Amayunithi Q326 QR3210 15GN 28GN
Ukukhiqiza T / h 0.6-1.2 1.5-2.5 5-6 10-12
Ukondla lemali kg 200 600 1300 3500
isisindo enkulu yama ucezu olulodwa kg 10 30 230 363
Ububanzi ekupheleni disk mm Ø650 Ø1000 Ø1092 Ø1245
ivolumu Ngempumelelo M 3 0.15 0.3 0,43 0,79
Shot-ukuqhumisa umthamo Kg / iminithi 100 250 480 700
Air ivolumu dedusting M 3/ h 2200 5000 5300 6500
amandla ukusetshenziswa kW 12.6 24.3 49,3 64,5
Uhlaka dimention mm 3681 * 1650 * 5800 3972 * 2600 * 4768 4597 * 3262 * 5709 5300 * 5432 * 6814
Tumble / abakhasi / irabha ibhande shot ukuqhumisa umshini wokuhlanza kahle
Tumble / abakhasi / irabha ibhande shot ukuqhumisa imininingwane umshini
Ukuqhumisa iKhabhinethi isakhiwo kwangaphakathi, iraba ibhande ekupheleni disk
Ukuqhumisa iKhabhinethi isakhiwo yangaphandle isithombe
ikheshi Ibhakede, isihlukanisi
Electric uhlelo lokulawula, ukugcinwa isitebhisi, nameplate
QR3210 shot ukuqhumisa umshini yokulayisha athula kudivayisi
amakhasimende ethu wavakashela embonini yethu
4sets QR3210 Tumble ibhande shot umshini blasitng ukufakwa e Pakistan
1set QR3210 Tumble ibhande shot umshini blasitng ukufakwa e Pakistan
Previous: Rolling sigubhu shot ukuqhumisa umshini
Okulandelayo: ujantshi omncane elihambayo shot ukuqhumisa umshini
Shot Abrasive ukuqhumisa Machine
Billet Ukuze Susa Skin oxide Shot ukuqhumisa Yokuhlanza Machine
Ukuqhumisa Machine Shot
Carbon Steel Shot ukuqhumisa Machine
Ukhonkolo Shot Blaster For Sale
Shot Ukhonkolo ukuqhumisa Equipmentconcrete Shot ukuqhumisa Machine
Ukhonkolo Shot ukuqhumisa Machine Inani
Ukhonkolo Shot-ukuqhumisa Machine
Conveyor Shot ukuqhumisa Machine
Floor Shot ukuqhumisa Machines
Foundry Izinsiza kusebenza Of Shot ukuqhumisa Machine
Highway Bridge Shot Isetshenziswa ukuqhumisa Machine
Shot Mini ukuqhumisa Machine
shot Ucingo ukuqhumisa Machine
Shot Ucingo ukuqhumisa Machine For yokwakha imigwaqo
Iphrofayela Steel Shot Blast Machine
rebar Shot ukuqhumisa Machine
Road Surface Shot ukuqhumisa Machine
Shot Rotoblast ukuqhumisa Machine
Shot Blast Yokuhlanza Machine
Shot ukuqhumisa Futhi Painting Line
Shot ukuqhumisa Machine Aluminium
Shot ukuqhumisa Machine For Ukhonkolo
Shot ukuqhumisa Ukwakha Machine
Shot ukuqhumisa Machine Inani
Shot Machine ukuqhumisa 2 Twin Motors
Shot ukuqhumisa Imishini Ukuze Steel Ibha
Shot ukuqhumisa Machines Isetshenziswa
Shot ukuqhumisa Material
Small Usayizi Shot ukuqhumisa Machine
Ezisetshenzisiwe Shot ukuqhumisa Izinsiza kusebenza For Sale
Shot Isetshenziswa ukuqhumisa Machine